janvier 2017 - Page 2 sur 50 -
Kamiao nivadika teny Anjozorobe : SAZY HENTITRA NO MIANDRY ILAY MPAMILY
31/01/2017 admintriatra 0
Taorian’ilay lozam-pifamoivoizana nitranga teny amin’ny tetezana Anjozorobe ny sabotsy lasa teo , izay namoizana ain’olona maro miisa 47, dia nangataka ny hampiharana ny sazy faran’izay henjana indrindra ho an’ny saoferan’ilay kamiao ny minisitry ny Fitaterana, …Tohiny
Kardinaly Pietro Parolin : « TSY MANDRESY LAHATRA FA MANOLOTRA SOSO-KEVITRA NY FIKETRAHANA MASINA »
Ny fandriam-pahalemana, ny fikatsahana ny fitoniana sy fifampiresahana ary fikaroham-bahaolana ho an’ny firenena voakasik’izany, ireo no isan’ny asa sahanin’ny diplomasian’ny fiketrahana masina ao vatican, hoy ny Kardinaly Pietro Parolin, nandritra ny famelabelaran-kevitra momba ny fifandraisana …Tohiny
«MBOLA LAVITRA NY LALANA !»
Mampalahelo tokoa ny zava-nitranga tany Anjozorobe farany teo. Fianakaviana am-polony be izao no indray namoy ny ainy tao anatin’ny iray segondra monja. Mitarika any amina adihevitra goavana anefa iny lozam-pifamoivoizana iny ary izay indrindra no …Tohiny
Fanararaotana : MISY MANAFINA SAHADY NY VARY
Tafiakatra 2 100 Ariary ny kilao amin’ny vary gasy eto an-drenivohitra amin’izao fotoana izao eny amin’ireo mpivarotra mpaninjara. Fiakarana efa ho 200 Ariary isaka ny kapoaka no hita tao anatin’ny herinandro izao. In-telo niakatra ny …Tohiny
Na mikorosy fahana na ianjadian’ny olana ara-pianakaviana mahery vaika ny ankamaroan’ireo mpanao politika akaiky an-dRajoelina. Lava dia lava ny lisitra saingy ny vitsivitsy amin’izy ireo aloha no hotanisaina etsy ambany. Tsotra ny antony : manody ...Tohiny